Daawo Sawirada:- Sheekada Filimka Befikre: Ranveer Singh Iyo Vaani Kapoor Waa Labo La Isugu Tala Galay - Hablaha Media Network
Daawo Sawirada:- Sheekada Filimka Befikre: Ranveer Singh Iyo Vaani Kapoor Waa Labo La Isugu Tala Galay
HMN:- Tan iyo markii mudo dheer ka hor la aas aasay shirkada Yash Raj Films banner (YRF) waxay shirkadaan caan ku tahay inay sameyso filimaan fariin ahaan kala duwan sidoo kalena la shaqeyso atoore kasto oo Bollywood-ka magac ku leh ama aan ku laheyn.
Hadaba waxaa tiyaatarada la saaray filimka Befikre oo ay hogaamiyaal ka yihiin Ranveer Singh iyo Vaani Kapoor oo ah filim jaceyl iyo shactiro isku jiro ah inta badana lagu duubay dalka France gudihiisa.
Befikre waxaa iska leh Director Aditya Chopra oo horey u sameeyey sedex Blockbuster oo xariir ah DILWALE DULHANIA LE JAYENGE, MOHABATTEIN iyo RAB NE BANA DI JODI.
Hadaba 8-sano kadib ayuu Director-nimo kusoo laabtay Aditya Chopra aan isla fiirino fariinya uu la yimid iyo waxa laga yiri:
Befikre oo ka hadlaayo in si xur in wax loo jeclaado noloshana casharo badan laga barto wuxuuna ka hadlaa sare u kaca iyo hoos u dhaca nolosha ay ka sameenayaan lamaane is doorteen balse dhalin yar.
Dharam (Ranveer Singh) iyo Shyra (Vaani Kapoor) waa labo dhalinyar oo dadka iska doorteen laakiin jaceylka u maleeyaan inuu yahay in la wada kaftamo, la wada cayaaro si xur ahna meeshii doono loo aado.
Waxaa dib looga sheekeenaa marxaladaha ayay nolol ahaan soo mareen labadaan lamaane ee dhalinta yar waxayna xasuusta ku bilaabanee Dharam (Ranveer Singh) oo magaalada Paris imaanayo asigoo ku cusub kadib saaxiibadiisa ayaa siinayaan shaqo ah inuu habeenkii ka shaqeeyo Hoteelada lagu caweeyo.
Dharam (Ranveer) goobta baarka ah ee uu habeekii ka shaqeeyo wuxuu kula kulmaa Shyra (Vaani Kapoor) waana gabbar Faransiis ah balse asal ahaan Hindiya kasoo jeedo.
Si dhaqsi ah ayay isku fahmayaan Dharam iyo Shyra waxayna go’aan ku gaarayaan inay nolosha wax isku dar sadaan hal meelna wada dagaan ayagoo is qabin nidaamka loo yaqaan (live in relationship).
Dharam iyo Shyra waxay ku balamayaa inay wada nooladaan balse waxyaabaha maala yacniga u arkaan sida waan ku jeclahay, waan kuu dhiimanaa iyo wixii la mid ah meel la iska dhigo kaliya si dan ku dheehan loo wada noolaado.
Waxaa dhaceyso in Dharam iyo Shyra markii dambe nolosha isku firaaqeeyaan oo ay soo gaba gabeeyaan xiriirkii wada noolaansho ee ka dhaxeeyay balse waxay sii wadanayaan inay saaxiibo caadi ah sii ahaadaan.
Waxaa dhaceyso in Shyra ay baraneyso wiilka aqoon yahanka ah ee masuulka ah Anya (Armaan Ralhan), kadib markii ay kulamo kooban wada qaataan kadibna Anya (Armaan Ralhan) wuxuu ka dalbanaa inuu guursado.
Dharam (Ranveer Singh) markii uu ogaado in Shyra guursan rabto isagana wuxuu sameynaa si la yaab ku dheehan inuu ku dhawaaqo in gabbar Faransiis ah Christine guursan doono!
Kadib waxaa xigaayo in Dharam iyo Shyra kala maarmi waayeen sidoo kalena noloshooda hadii ay labo wado kala qaadeen xitaa aysan ku faraxsaneyn.
Hadaba ugu dambeyntii Shyra yey dooran doontaa ma waxay u laaban doontaa Ranveer Singh mise waxay si toos ah u guursan doontaa wiilka nolosheeda wax badan ka badalay Anya (Armaan Ralhan)?
Ranveer Singh isagana siduu dib ugu helaa Shyra oo uu ka raacay gabadha Faransiiska ah Christine ee uu si maseer ku dheehan u sheegay inuu guursan doono?
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Befikre?
Goos gooska iyo sawirada filimkaan waxaa lagu xayeysiiyay in badan shumisyo kala duwan laakiin xaqiiqada waxay tahay in filimkaan uu yahay jaceyl, shactiro iyo mid dhalinta loogu tala galay.
Director Aditya Chopra filimkiisa Befikre waa mid ka hadlaayo xiligaasn casriga ah sida ay u dhaqmaan dhalinta reer Hindiya kuwooda ilbaxda ah.
Balse Befikre marnaba ma gaari doono sedexdiisii filim ee hore laakiin fariin cusub ayuu la imaaday midaas oo si gaar ah dhalinta da’dooda u dhaxeyso 18-sano ilaa 25-sano loogu tala galay.
Befikre iyo Dilwale Dulhania Le Jayenge farqiga u dhaxeeyo wuxuu yahay mid dhaqan ku saleesan iyo jaceyl masuuliyad ah halka midka kalena uu yahay mid dhalin yarada u gaar ah jaceylkana marka hore lagu liidayo balse markii dambe dib loo soo nooleenayo.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka Befikre:
Sheekadiisa oo ka hadleyso dhalinta caalamka gaar ahaan reer Galbeedka sida ay u dhaqmaaan
Director Aditya Chopra oo fariintiisa si wacan u diyaariyay qaybta hore ee filimkaan.
Wada shaqeynta Ranveer iyo Vaani waa mid soo jiidasho gaar ah leh
Heesaha filimkaan waa kuwo siweyn looga helaayo.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Befikre?
Qaybta labaad ee filimkaan ma ahan fariin ahaan mid siweyn isugu toosan xoogaa waa lagu yara caajisayaa.
Befikre waa filim dadka ilbaxda ah ee reer magaalka ah oo kaliya ka heli doonaan.
Befikre waxaa ku badan shactirada, kaftanka iyo damaashaadka halka jaceylka iyo qiirada ay ku yar yihiin.
Bandhiga Ranveer Singh Iyo Vaani Kapoor sameeyeen:
Ranveer Singh waa atoore door walbo sameyn karo iska hilmaan wajigii ad adeega badnaa filimkii Bajirao Mastani markaana wuxuu la yimid waji dabacsan oo dhalinta siweyn kaga heli doonaan.
Waxaaba moodaa in doorka Befikre isaga loogu tala galay sida uu kaga baxsaday dhanka shactirada, dhibka, kaftanka iyo jaceylka loo baahan yahay, waa hubaal in Ranveer doorkiisa cusub amaan balaaran ku heli doono.
Vaani Kapoor waaya aragnimo dheeraad ah ayaa xidigtaan ka muuqato waxayna ku amaan tahay inay si wacan ula jishay Ranveer Singh oo ay shaashada ku muujisay sida ay isugu kalsoon tahay.
Run ahaantii Ranveer iyo Vaani qaabka ay Befikre u mataleen waxaaba loo moodaa inay si dhab ah noloshaas filim jilista ah ugu dhex jiraan!
Armaan Ralhan isagana waa shaqsiga sedexaad ee sheekada filimka Befike ku tiirsan tahay isagana doorka la siiyay si wacan ayuu kaga soo dhalaalay.
Befikre waa filim dhalin yarada reer magaalka ah loogu tala galay sidoo kalena dhalinta siweyn kaga heli doonaan qaabka fariintiisa loo dhigay.
Dadka dhalin yarada ah ayaa filimkaan guul gaarsiin karaan hadii ay sheekadiisa ka helaan iskuna sheeg sheegaan balse ma ahan filim qof walbo ka heli doono gaar ahaan dadka waa weyn iyo qoysaska.